China Malaysia- SIRIM Inkonzo kunye noVavanyo |MCM
Ngokhuseleko lomntu kunye nepropathi, urhulumente waseMalaysia useka iskimu soqinisekiso lwemveliso kwaye ubeke iliso kwizixhobo zombane, ulwazi & nemultimedia kunye nemathiriyeli yokwakha.Iimveliso ezilawulwayo zinokuthunyelwa eMalaysia kuphela emva kokufumana isatifikethi semveliso kunye nokuleyibhile.
I-SIRIM QAS, icandelo eliphantsi kweMalaysian Institute of Industry Standards, kuphela kweyunithi echongiweyo yesatifikethi yee-arhente zolawulo zelizwe laseMalaysia (KDPNHEP, SKMM, njl.).
Isatifikethi sebhetri yesibini sichongwe yi-KDPNHEP (uMphathiswa waseMalaysia woRhwebo lwaseKhaya kunye neMicimbi yabaThengi) njengoyena gunyaziwe woqinisekiso.Okwangoku, abavelisi, abarhwebi kunye nabarhwebi banokufaka isicelo sesiqinisekiso kwi-SIRIM QAS kwaye bafake isicelo sokuvavanywa kunye nokuqinisekiswa kweebhetri zesibini phantsi kwemo yesiqinisekiso selayisensi.
▍Isatifikethi SIRIM- Ibhetri yesibini
Ibhetri yesibini okwangoku iphantsi kwesiqinisekiso sokuzithandela kodwa izakuba kuluhlu lwesiqinisekiso esisisinyanzelo kungekudala.Olona suku lunyanzelekileyo luxhomekeke kwixesha elisemthethweni le-Malaysian isaziso.I-SIRIM QAS sele iqalisile ukwamkela izicelo zesiqinisekiso.
Umgangatho wesiqinisekiso sebhetri yesibini : MS IEC 62133:2017 okanye IEC 62133:2012
●Kusekwe utshintshiselwano olulungileyo lobugcisa kunye nejelo lokutshintshiselana ngolwazi kunye ne-SIRIM QAS eyabela ingcali ukuba iphathe iiprojekthi ze-MCM kunye nemibuzo kuphela kunye nokwabelana ngolwazi lwamva nje oluchanekileyo lwale ndawo.
● I-SIRIM QAS ibona idatha yovavanyo lwe-MCM ukuze iisampulu zivavanywe kwi-MCM endaweni yokuba zisiwe eMalaysia.
● Ukubonelela ngenkonzo yokuma enye kwisiqinisekiso saseMalaysia seebhetri, iiadaptha kunye neeselfowuni.
Okulandelayo: Yintoni isiqinisekiso se-AIS eIndiya?Ngaba isiqinisekiso se-AIS sinyanzelekile?
Isatifikethi seSirim saseMalaysia
Ixabiso leSiqinisekiso seSirim saseMalaysia
Inkqubo yeSiqinisekiso seSirim yaseMalaysia
Inkonzo yeSiqinisekiso seSirim saseMalaysia
Ixesha lokukhokela i-Sirim yaseMalaysia
Isicatshulwa saseMalaysia Sirim
Ingxelo yeSirim yaseMalaysia
Amaxwebhu e-Malaysia Sirm Technical
Izinto zoVavanyo lweSirim zaseMalaysia
Indlela yoVavanyo lweSirim yaseMalaysia
Ingxelo yoVavanyo lweSirim yaseMalaysia
Ixabiso le-Malaysia Sirm Testing
Inkonzo yoVavanyo lweSirim yaseMalaysia
Ixesha loVavanyo lwaseMalaysia Sirim
eMalaysia uSirim Tr